Atao amin’ireo toerana ifaneraseram-bahoaka rehetra manerana ny Boriborin-tany 05 sy amin’ny kaominina Suburbaine izao famendrahana VIROKIL izao, ary amafisina ny fanentanana sy fitaomana ny vahoaka hihazona ny fitandremana. Ny tanjona dia mba tsy ho varimbariana ny isam-batan’olona fa mbola ao anatiny ady tanteraka i Toamasina sy ny manodidina. Eny fa na dia mihamaro Aza ny isanireo sitrana raha oharina amin’ny marary vaovao.
Marihina fa ny VIROKIL dia fanafody tena mahomby, ampiasain'ireo firenen-dehibe toa an'i Chine sy Korea. Ekipa nahazo fiofanana manokana avy amin'ny BMH sy sehatra hafa manampy isa azy ireo, no hiandraikitra izao ezaka izao.